Sunday July 12, 2015 - 10:16:29 in Wararka by Web Admin
Dhimo ceebna reeb waa 1 eray ama 2 eray oo macaani farabadani aay kujto Tusale, qof walba oo nagamid ahi wuu dhimanayaa,
Tusaalaha Kowaad, hogamiyaasha Somalida markow kulajoogo,, waa ladhageysataa markow kaamaqanyahayna waa ladhoowraa oo waalasugaa, inta oow noolyahayna waala amaanaa marka oow dhintana waaloo duceeyaa.
Tusaalaha labaad, Hogaamiyaha Soomaaliyeed marka uu kulajoogo waalooqoslaa, markuu kaatagana waalacaayaa inta oow noolyahayna waalahabaaraa, marka oow dhintana waalagaduceystaa oo waxaa layiraahdaa rabigiin adhafiyay ayaa mahad iskale.
Midka 1.aad, ducada iyo amaanta waxoow kumuteystay waa hogaamiye daacad ah, xilkas ah, xaqdhowr ah dadkuna isugu midyihiin kuna fikirayo iney taariqdu xusto birito.
Qofwalbo oo Soomaali ah waxoow xusuustaa oo niyadiisa marnaba kago'eynin shaqsiyaadkii usoohalgamay Calankeena iyo Ciideena, Siyaasiga amaanan waamidka kafog Qabyaalada iyo kalafaquuqa Tarikhda ayaana xusidoonta.
Midka 2aad waalaga ashahaadtaa waxaana layiraahdaa Dhimo oo Ceyb reeb danta qaranka waxoow kahormariyaa tan qabiilka danta qabiilkana tiisa,,,
Aqristoow, dad maceebla'yahay lamayiraahdo ee maceymayaa ayaa layiraahdaa !!!
Hadaba hogaanka labada maamul ee kala ah "Putland iyo Juba" maqabyaalad ayeey isubaheysteen mise in qaranka lasaxo?, waa jawaab idinka idin taalo
W`/Q Sayid Hassan Ali
Shariif Xasan oo Ciidamo ku hayb ah Geeyay Madaxtooyadda Koonfur Galbeed
30/10/2018 - 09:18:17